Iifoto ezimangalisayo kunye neevidiyo zenyikima kunye netsunami eJapan -Geofumadas
Iifoto ezimangalisayo kunye neevidiyo zenyikima kunye netsunami eJapan
Matshi, 2011 Iiphotography, yokuzonwabisa
Kuloo nto, iyothusayo. Ngoxa sasiseNtshona-ntshona saseYurophu kwaye saseMelika sinobuhle bokulala, inyikima yama-degrees ka-9 Richter yakhupha iJapan xa kwakukho i-3 emini.
Ukubukela iividiyo zokungena kwamanzi kunye nokuthwala izindlu, izithuthi kunye neenqanawa kwahlukile. Kuthiwa yeyona yomeleleyo kwiminyaka eyi-140 kwimbali yaseJapan, kwaye isihlanu emhlabeni. Sikhumbula ezakutshanje eChile naseHaiti, kodwa le meko yahluke kakhulu.
Kunika umdla ukwazi ukuba inani labantu abaswelekileyo liphantsi kakhulu, nangona ngokuqinisekileyo liza kukhula njengoko iindawo ezonakeleyo zilinganiswa ngokubanzi; bonke abemi bonxweme banokunyamalala. Kuyamangalisa ukuba kwivenkile enkulu, endaweni yokubalekela phantsi kwekholamu, abasebenzi bakhusela iifestile zevenkile ukuze imveliso yomzamo wabo ingawi phantsi. Inkcubeko eyothusayo yezokhuseleko kulwakhiwo kunye nemfundo yento ekufuneka yenziwe ngezo meko.
Kuhleli kubonakala ukuba kwenzeka ntoni kwiPasifiki yaseMelika, ethe yaziswa, kuba isiphumo kumanxweme siza kubonakala kwiiyure ezininzi kamva. Sele isaziwa into yokuba isiphumo sifikile eHawaii, nangona kubonakala ngathi asisiyonyani njengoko besenza iintatheli kunye nezopolitiko. Nangona ingamaxesha okulila ngenxa yoluntu, ndiye ndahleka xa oonondaba ababini bezama ukucacisa ukuba bazakufika nini kunxweme lwasePeru, bezama ukubala inani leeyure eziqikelelweyo, isantya esiqikelelweyo kumaza kunye Umahluko wexesha kuba iliza liza ngokuchasene nomda wexesha.
Le mephu ibonisa iiyure eziqikelelweyo zesiphumo sentsalela yetsunami eya kuthi ifike eMelika. jonga ukuba kwimeko yaseChile, ifika ekuzeni kokusa kodwa sele ingoMgqibelo. Ngelixa kuMbindi Merika phakathi kwe-8 ne-12 ebusuku.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Kudala ngoku, umsi weminyaka eyi-10,000 XNUMX
Post Next Yintoni Entsha AutoCAD 2012 | ukuthambekelaOkulandelayo »